Nchịkwa ngalaba nchịkwa ala - ikpe nke Colombia - Geofumadas
Gịnị ka ị na-achọ?
Usoro nke Civil3D
Usoro ọmụmụ Geology
Ihe omume Geo-engineering
Ọbá akwụkwọ ọgbara ọhụrụ
Nchịkwa ngalaba nchịkwa ala - ikpe nke Colombia
Machị, 2016 cadastre, Geospatial - GIS, Land Management
Nlekọta nke ụwa bụ ugbu a bụ otu n'ime nsogbu ndị isi na mba. Ọ bụghị ọchịchọ ọhụrụ, ebe ọ bụ na ọrụ ya karịrị ihe doro anya na isi isiokwu nke usoro iwu na iwu dị iche iche na-achịkwa mmekọrịta nke ndị bi na akụ na ụba nke ọha na eze. Agbanyeghị, enwere usoro mba ụwa maka nguzobe nke usoro mba nke na-eme ka amụma mba sie ike nke ha nwere ike iji uru ndị teknụzụ na-enye ugbu a, ihe ndị chọrọ maka ijikọ ụwa ọnụ na n'ezie mkpa ndị bi na ya maka arụmọrụ nke ọrụ ọha.
Site na isi iyi dị mma a gwara m na Colombia dị ugbu a na ntinye ISO 19152, nke a maara dị ka Nlereanya mpaghara ngalaba. LADM, karịa ịbụ ụkpụrụ nke itinye n'ọrụ zuru ụwa ọnụ, bụ nsonaazụ nke ọtụtụ ndị ọkachamara na njikwa ihe onwunwe, sitere na ọmụmụ banyere otu mba dị iche iche nke ụwa si eme ya n'ihi nkwupụta 1998 ahụ nke na-ekpechi nnọchi anya nke atụmatụ cadastre nke ọdịnala site na iji ụdị. Nke a bụ isi ihe kpatara na ndị LADM enweghị ike ileghara anya site na ndị ọkachamara jikọtara na sayensị ụwa na n'ihe banyere Colombia, dị ka atụ anya ya, a hụghị ihe ngwọta n'onwe ya, mana site na echiche nke gbasara asụsụ gbasara mbara igwe, dịka onye nhazi maka mmejuputa iwu nke mba maka nchịkwa ọ bụghị naanị ikike ala kamakwa n'ozuzu nke akụ dị iche iche nke mba ahụ.
M na-ekwu banyere ikpe Colombia, n'ihi na ọ ga-adị mkpa ịmara maka ọganihu ya, dị ka mmega ahụ na-atọ ụtọ nke ga-abụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ihe karịrị Latin America. Na mpaghara nke mbụ malitere na ọkara nke abụọ nke 2015, ọ bụghị naanị na ọ nwere ihe ịma aka nke ijikọ ụlọ ọrụ dị iche iche metụtara njikwa ihe onwunwe na akụ na-enweghị atụ nke mba ahụ; Ndi ndu na ntozu oke nke ulo oru dika Agustín Codazzi Institute, Superintendency nke Notaries and Registry abiala nke oma, na mmetuta nke nkwado mba na-acho ime ka omume oma di n'uwa.
Geofumar na LADM yiri mkpebi amamihe, nyere ihe ịma aka nke mainstream atụmatụ na imaatu omume nke ozu dị ka Program ka Formalize Rural Property Unit Land Idozi z, ndị Colombia na-azụ Institute maka Rural Development INCODER na cadastre decentralized na ụfọdụ, m na-eche na ha nwere mma ọnọdụ ka mba ikike nke mkpa imeghari ka mgbanwe.
Ọnọdụ ụwa na nchịkwa ala.
Aghaghị m isi ọnwụ na Nchịkwa ala abụghị sayensị a na-amaghị ama maka imirikiti ndị ọkachamara na ngalaba Land Registry-Registry-Land Management. Ọ ga-abụ ihe ọhụụ ịghọta ụdị UML nke egosiri ọkọlọtọ LADM na ụzọ isi nweta atụmatụ nke ụlọ ọrụ dị adị na tupu usoro teknụzụ na-arụ ọrụ. Ya mere, iji kwado okwu a, echetara m uru nke usoro a na-apụghị ịgbagha agbagha na Nchịkwa Ala nke egosiputara n'otu n'ime ogbako nke oge a na nke m na-enweghị ike ịkọwa n'ókè ahụ na nke doro anya. ma ha na-anọchite anya isi nsogbu nke usoro Colombia.
La nhazi nke usoro nwelite ihe ọmụma, si na etiti etiti dị na gọọmentị obodo, site na ịchọta ọrụ ọ bụghị naanị na usoro gbasara ụlọnga azụmahịa kama ọ bụkwa iwu.
Njikọ nke usoro azụmahịa site na ọrụ nke mmekọrịta n'etiti ndị nwere mmasị, gụnyere gọọmentị, na-achịkwa ihe ndị na-anọchite anya ikike nke mmasị ọha mmadụ. Akụkụ na-adọrọ mmasị nke omume a bụ na mkpokọta etiti apụtaghị na ndị ọzọ na-arụ ọrụ gọọmentị, ebe ọ bụ na usoro nke mbụ na-akwado ya, nke ndị na-ahụ maka azụmahịa bụ ndị gọọmentị mpaghara, ndị ọrụ nzuzo na ndị mmadụ n'otu n'otu; ma na-arụ ọrụ nchịkwa azụmahịa nke mba.
Ojiji nke databases na akụkọ ihe mere eme nke data nhazi na nke geometric, gosiputara ma na nchekwa nke akwukwo na ebe omuma. Nke a na-egosi ọ bụghị naanị ịme nchọpụta mpaghara ma ọ bụ atụmatụ atụmatụ, kamakwa ịmegharị ya wepu ya ka ọ nwee ike itinye aka na ụlọ yana ịkọwa ụdị nke ọ dị ugbu a.
Ojiji nke ụdị data nhazi n'agbanyeghị nkà ihe ọmụma nkà na ụzụ, ịgbaso ụkpụrụ ndị na-eche echiche banyere ihe ezi uche dị na ya nke ma ihe nlereanya na usoro ahụ dị; n'agbanyeghị ma a na-eji ngwanrọ ma ọ bụ software n'efu.
Ntugharị ihe nlereanya, nke a maara n'asụsụ Bekee dị ka MDA (Ụlọ ihe eji eme nke ọma). Ọ bụghị akụkụ dị mfe, n'ihi ịdị ngwa nke mmekọrịta mmadụ na-eri nri data na ihe ize ndụ nke ịnwụ n'oge na-enweghị mmeri mbụ nke na-egosi ụgwọ akwụ ụgwọ nke ịgbanwe echiche.
Mwepu nke ikike ala, ojiji nke ala na ime obodo, mee ka ọ dị mfe na mmekọrịta Ihe-Isiokwu-Nri, ma agbatịkwuru atụmatụ nke na-enye ohere ịhụ mmekọrịta nke ikike karịrị ihe iwu ahụ kwupụtara n'ụzọ doro anya na ọ nwere ike ịdaba na ihe onwunwe a na-ahụ anya.
Na-ele Cadastre anya site na usoro ndụ, na ọrụ iji chee echiche banyere 3D, nke ọ bụ ezie na ọ bụghị ọhụụ ọhụụ n'ihi enweghị ike iji mezue mkpuchi 2D, a ghaghị itinye ya ọbụna na ọkwa nchịkwa n'ihi mkpapụ obodo nke ngwa ngwa na mkpa ịdị njikere 4D, obughi site na a BIM optics ma n'ihi na mmekọrịta ahụ na oge na-arụ ọrụ na akpaaka.
Nhazi ihu mfe ma dị mfe nke iji, nke putara imebi ihe ngosi nke Bank Bank iji mezue uwa nile n’ime obere oge site na iji ala okwu a dika ntinye ihe di mkpa kama ejikoro na ndekọ aku, na ibuputa ihe omuma banyere mgbe anyi nwere oge -na ọlaọcha-. Site na mgbe ahụ anyị nwere ike ịchọpụta na ụwa niile emeela ezumike OpenCadastreMap ndị ọzọ.
La ntinye nke multidisciplinary nke ndị mmadụ jikọtara na nchịkwa ala, onye ọ bụla na-eme ihe nke aka ya, na sistemụ ya, mana na-emegharị na ụdị ngbanwe data n'okpuru ụkpụrụ mmekọrịta. N'ezie, nke a na-egosi na anaghị ahụ teknụzụ dị ka njedebe n'onwe ya kama dịka ụzọ iji nweta ebumnuche akọwapụtara; Ọ na-egosi iji nwayọọ nwayọọ na-agbakwunye ndị na-eme ihe nkiri, na-ezere ịhapụ ndị ọkachamara nwere ahụmahụ n'ihi na ha ekwekọghị na teknụzụ, kamakwa na-enye ndị na-eto eto ike ịdị njikere iweghara ụzọ ahụ ga-ewe ọtụtụ afọ.
Ihe ịma aka nke Colombia na LADM
M na-atụ aro dị ka mmega uche nke ngwa izugbe, ịgbaso ihe Colombia ga-eme, na ịkwụwa aka ọtọ na ọ nweghị mfe, mana na site n'ọchịchọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nnọgidesi ike maka ebumnuche dị elu nke mba dị nchebe ha ga-enwe ike iji ohere ndị dị ugbu a. Ha na egosiputa -na ha ga-achọ inwe mba ndị ọzọ- N'ime ndị na-enwu:
Njikọ nke ikike ọha na eze dị ka ihe ndekọ nke na-egosipụta akụ ahịa ala ma na-eme ka ọ bụrụ ikike, mgbochi na ibu ọrụ nke ma ụlọ ọrụ ọha na eze na nkeonwe nzuzo.
Mmepe nke ọrụ ụgbọelu multipurpose cadastre, n'okpuru ọhụụ nke ịmepụta faịlụ cadastral site na inyefe ọrụ nke imelite data.
The conformation nke a Nchịkwa nchịkwa ala n'ime ụlọ ọrụ Colombia nke Data Spatial Data ICDE, dịka ihe atụ nke na-agafe karịa ndokwa nke data ndị a na-ahazi.
Na-emelite usoro ndị na-eme ka ọrụ gọọmenti obodo dị mfe ma na-adabere n'ụkpụrụ atumatu, karịsịa maka nyocha nke cadastral, mana oghere nke iji ebuli ụzọ, na-eme ka ihe «jụụ»Nke ihe dikwa mgbagwoju anya na ntinye aka maka ibido data emelitere.
Bikocity site na agha na polygon, tupu enweghi ike izere ihe omuma nke mba ahu site n'iji ESRI eme ihe dika odidi nke Chineke na isi ike nke ndi na-ese anwuru nke ISO-19152 iji chekwaa arc-node dika uzo mbu iji kọwaa uwa.
Mmekọrịta nke Debanye aha na Ndebanye aha na otu usoro azụmahịa, nke enwere ike ihu ọ bụghị naanị onye bụ onye okike / iwu / ọha na eze kamakwa ikike agbakọtara na ihe gbasara ezigbo ụlọ, jiometrị ya na ebubo iwu na nhazi. Ihe ịma aka a, karịa mgbanwe mgbanwe ụlọ ọrụ -nke ahụ abụghị ngwa ngwa- Ọ na-egosi ntụgharị uche nke ọhụụ n'ọhụụ zuru ụwa ọnụ nke akwụkwọ ndekọ ahụ, dị ka ibu ọrụ nke steeti, karia ngwa ngwa ngwa ngwa nke ọrụ na ezi ebumnuche kamakwa ọchịchọ nke ịbịakọta n'ime iwu ọha na eze nke mmasị mba.
Ọhụụ ụwa nke LADM flattanzed na ihe ndị Colombia mere maka ọtụtụ afọ.
Ndepụta chọrọ bụ enweghị njedebe na n'ụzọ dị mma, ọbụlagodi utopian. Mana otu mmetụta ahụ mere onye ọbụla afọ iri na anọ gara aga mgbe onye nkụzi ha nyere ha akwụkwọ abụọ ga-agbanwe ụzọ ha si ahụ ụwa; Karịsịa ma ọ bụrụ na akwụkwọ ndị a bụ nkọwa nke Cadastral Proposal 14 nke FIG na nkịtị nke Chrit Lemmen «Nlereanya ngalaba nke Cadastral".
Previous Post«Previous BIM - Uwa m gaara arọ iri n’afọ iri abụọ gara aga
Next Post Download Google Earth maka ebe utmNext »
Adreesị email gị agaghị bipụtara.
Ihe ọmụmụ niileArcGIS ọmụmụMmụta BIMIhe nkuzi nke obodo 3DỌmụmụ BIM ElectromechanicsIhe nkuzi BIMETABS ọmụmụUsoro nkuziIhe ọmụmụ QGIS
#BIM - Usoro zuru oke nke usoro BIM
N'ime usoro mmụta dị elu a, m na-egosi gị nzọụkwụ site na nzọụkwụ otu esi etinye usoro BIM n'ọrụ na oru na otu. Gụnyere modulu ...
Lee ndi ozo ...
#BIM - Autodesk Revit Course - dị mfe
Dị mfe dịka ịhụ ka onye ọkachamara si zụlite ụlọ - kọwara nzọụkwụ site na nzọụkwụ Mụta AutoDesk Revit n'ụzọ dị mfe ....
#BIM - Usoro nkuzi eji arụmọrụ eji AutoDesk Robot Structure
Ntụziaka zuru oke maka ojiji nke Robot Structural Analysis maka ihie, ịgbakọ na imepụta ihe eji arụ na nchara…
Ụzọ nke oge a
Mba ole ka e nwere n’ụwa?
Kedu usoro ihe anọ dị n'ụwa?
Kedu mba nwere mpaghara mpaghara oge kachasị?
Gịnị bụ oge mpaghara?
Maapụ oke osimiri na-ebili na Sentinel-6
Copyright © 2020 ị egeomates
3D Civil Specialization - Lee mgbe e mesịrị
32 awa vidiyo - 100% n'ịntanetị
Mụta ArcGIS Pro - Mfe
Asụsụ gị - 100% n'ịntanetị